EZI AFỌ ỌHỤRỤ 2014! ANA M ENYE ONYINYE. - ISIOKWU - 2019
Na-achịkọta nkesa onyinye! (Ka m na-ekesa ha na ederede nke mbido mbụ dị n'okpuru akwụkwọ a). Iju, ma nani mmadụ atọ chọrọ inweta onyinye, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke feedburner, ihe karịrị ndị debanyere 50 bịara ịgụ isiokwu a. N'ihi ya, ekpebiri m na agaghị m etinye onyinye abụọ, dịka e mere atụmatụ na mbụ, kama iji gosipụta akwụkwọ atọ niile ndị na-agụ akwụkwọ chọrọ ịnweta dịka onyinye:
Sergey, akwụkwọ Michael Kofler - Linux. Ntinye, nhazi, nchịkwa. E debanyere Sergey n'akwụkwọ akụkọ ahụ kemgbe December 14, 2013. Edebanyela aka 🙂
Helen, akwụkwọ nke otu akwụkwọ Chinese ji n'aka Colin Campbell mee akwụkwọ. Anyị na-eziga. Ọ bụ onye na-agụ ihe kemgbe May 2013.
Alex, Richard Branson's Autobiography na Bekee. Agaghị m enye aha m akụkọ banyere onwe m ma wepụ ha site na nkwupụta. Enweghị ihe ọjọọ na ya, mana ọ na-eme na engines ọchụchọ na-aṅa ntị na ihe ndị dị otú ahụ, obere aha ambiguous. Onye ọrụ enyi Alex dere site na njedebe nke ọnwa Ọktoba ka bụ afọ dị ugbu a.
Ọ bụ ya! Obi ụtọ na afọ ọhụrụ gị na ihe kacha mma! M ga-ezitere onye ọ bụla site na e-mail iji kọwaa nkọwa nke izipụ onyinye. Ma, n'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịchọtaghachi ihe ọzọ, jiri obi ụtọ nye onyinye ma ọ bụ. Ezigbo ihe ọ bụla!
Ndewo, ndị na-agụ na ndị nleta batara na saịtị m!
Ekele niile afọ ọhụrụ! Achọrọ m ka afọ ọhụrụ mụta ihe dị ọhụrụ, mee nchọpụta, nọgide na-eju ụwa gburugburu anyị ma ghara ịkụ ụda. Dị ka akụkụ nke, n'ezie, ezigbo mmekọrịta na ndị ọzọ 😉
M kpebiri inye onyinye. M ga-enye akwụkwọ ahụ. Na mbụ, echere m ịhazi ụdị mpi, ma kpebiri ime nke a ...
Taa, enwere m mmadụ 377 na ndị na-edeba aha m E-mail, naanị m zọpụtara ndepụta a na kọmputa m, ana m achọ inye ha onyinye (ya bụ, ndị gụrụ akwụkwọ na-agụ m ruo ugbu a).
Ọ bụrụ na ị bụ onye debanyere aha n'etiti ha, ị nwere ike ịhọrọ akwụkwọ na ozon.ru na ọnụahịa nke elu 1000 rubles. Ọ bụghị nke ọ bụla, ma ọ bụ naanị maka agụmakwụkwọ, ma ọ bụchaghị maka kọmputa, ọ nwere ike ịbụ ihe osise osisi na ntuziaka nduzi onwe onye maka ndị Japan.
Dee ederede nke ị depụtara aha ị chọrọ (n'ime e-mail ubi, ezipụta adreesị ozi-e e debara na listi; ịkwesighi inye njikọ na akwụkwọ ahụ, naanị aha na onye edemede).
Onye mburu nke mbụ na nke ise onye hapụrụ okwu ga-enweta akwụkwọ achọrọ. Nkwupụta site na "ndị na-abụghị ndị debanyere aha" adịghị esonye na ọnụ ọgụgụ ahụ, ma ha anaghị ehichapụ ya (ma e wezụga maka spam na ihe ọjọọ ndị ọzọ). Site na onye ọ bụla debanyere aha naanị okwu mbụ na-emetụta ọnụ ọgụgụ a (ọ bụrụ na ị dee ọtụtụ).
A gaghị egosipụta nkwupụta ruo mgbe elekere 10 nke ụtụtụ na 12/31/2013, mgbe ahụ, a ga-egosipụta ndị mmeri, n'otu oge ahụ a ga-ekwupụtakwa ndị mmeri (n'otu isiokwu dị n'okpuru ebe a). M ga-ezigakwara ha site na e-mail iji kọwaa nkọwa nke mbupu. Ọ bụrụ na oge a enweghị ọbụna ihe ise si n'aka ndị debanyere aha, m ga-akpọsa nke a ma chere ruo mgbede nke 31. Ma echere m na a ga-agba ya.
Ọ bụ ya! Ọ dị mfe. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enweta mgbe niile leta si remontka.pro, họrọ akwụkwọ na-agwa! Obi ụtọ afọ ọhụrụ!
MGBE: 12/31/2014, 9:42: Ruo ugbu a, ọ bụghị otu onye na-akọwa. Naanị m ga-ezipụ akwụkwọ ozi ahụ, ana m enwe olileanya na ọ ga-apụta. Aga m ele ọnọdụ anya mgbe nri ehihie.
MGBE: 14:28: Nke mbụ bụ - Sergey, akwụkwọ nke Linux. Ntinye, nhazi, nchịkwa, Michael Kofler. Ma nke ise abụghị. Ana m echere ruo oge 18:00 nke Moscow, mgbe nkea gasịrị, akwụkwọ nke abụọ ga-aga na onye nyocha ikpeazụ, onye n'oge a bụ Alex. Ma ọ bụ nke 5, dịka ọ dị n'okpuru ọnọdụ, ọ bụrụ na ọ na-egosi.